Indlu yamatye enomtsalane kufutshane neRodiles Beach - I-Airbnb
Indlu yamatye enomtsalane kufutshane neRodiles Beach
Indlu yamatye ebuyiselwe kakuhle kwilali yaseSelorio, ixhotyiswe ngabo bonke ubunewunewu bale mihla ofuna ukwenza ukuhlala kwakho kube kukhethekileyo.
Ukuhamba ngemizuzu engamashumi amabini ukusuka kulwandle olumangalisayo lweRodiles kunye nokuhamba kancinci ukuya kwibha yasekhaya, indawo yokutyela egqwesileyo kunye neevenkile ezininzi zelali.
I-Casa Caveda yindlu yendabuko yase-Asturias, eyakhiwe kwisiqingatha sokuqala senkulungwane ye-19 kwaye isanda kubuyiselwa ngabakhi bezobugcisa bendawo, besebenzisa ilitye lokuqala, izitena ezibuyiselweyo kunye ne-oki kunye nemithi ye-chestnut. Ngodonga lwamatye oluveziweyo ngaphakathi nangaphandle kunye nomgangatho onomtsalane we-oki kunye nesilingi, ukuhlala apha kukunika ithuba lokuba namava endlu eqhelekileyo yase-Asturian.
Kwangaxeshanye kukho bonke ubunewunewu bale mihla ukwenza iholide yakho ibe yekhetheke kakhulu. Ikhitshi elihle elinomphezulu womsebenzi wegranite kunye nazo zonke izixhobo ezitsha, kubandakanya: umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba, umpheki, isitovu sokungeniswa kunye nefriji yeSmeg. Umatshini weNespresso we'cafe con leche' yakho yasekuseni. Ukuhamba ngemvula yaseGrohe. Ibhedi enkulu elingana nenkosi.
Itekhnoloji ayikalityalwa, indlu ine-intanethi, iTV ene-chromecast, irediyo ye-Intanethi yakwaRoberts, ibluetooth c.d. Umdlali kunye neDyson eshushu + epholileyo.
Indlu imi kumbindi weSelorio, ilali encinci yaseAsturian kufutshane nonxweme. Imalunga ne-100m ukusuka kwindlela eya eRodiles, ineendawo ezininzi zokupaka. I-Selorio ineevenkile ezimbini kunye neendawo ezimbini zokutya, enye yazo 'i-El Cruce' yenye yezona ndawo zidumileyo zokutyela kule ndawo kunye neyona 'pulpo' ibalaseleyo e-Asturias. Ukudlula phambi kwendlu yindlela yokuhamba PR.AS 231, ihlola ichweba 'Ria de Villaviciosa' kunye noLwandle lwaseRodiles.
Izilwanyana zasendle ezikufutshane naseSelorio ziyamangalisa, kunye nenyamazane kunye neehagu zasendle zihlala zibonwa ngaphandle kwedolophana kunye nabantu abafana neentaka iRia yaseVillaviciosa ibhengezwe 'iNdawo yoKhuselo oluKhethekileyo lweeNyoni.'
Ndihlala kwilali enye neCasa Caveda kwaye ndiya kuba kufutshane ngexesha lokuhlala kwakho ukuba unemibuzo okanye iingxaki.
Inombolo yomthetho: VV-1032-AS